By Carolyn Hyman | Febraayo 21, 2022
Katerina, oo ah 61 jir degan Waikiki ayaa wacday khadka caawinta ee AUW's 211 iyadoo argagaxsan. "Waxaan helay warqad aan u baahnaa si aan u cusboonaysiiyo macluumaadka SNAP-kayga haddii kale faa'iidooyinka ayaa joogsan doona. Waxaan saaxiibkay ka codsaday inuu iga caawiyo kombiyuutarka sababtoo ah ma aqaan sida loo sameeyo alaabtaas." SNAP, haddii kale loo yaqaan Sdheeraad ah Nilbaxnimo Akaalmo PRogram waa halbowle u ah qoysas badan iyo kūpuna sida Katerina, gaar ahaan. Tan iyo markii uu cudurku ku dhacay, Katerina saacadaha nadiifinta kirooyinka fasaxa waa la gooyay ku dhawaad waxba. "Waxaa jiray baajin aad u badan, ma shaqeeyo saacado ku filan," ayay tidhi. Faa'iidooyinka SNAP waxay wax ka beddelaan inta ay tahay inay cunto bil kasta. “Waxa aan xafiiska soo wacay ku dhawaad laba toddobaad aniga oo aan wax jawaab ah ka helin, mana garanayo in aan si sax ah wax u gudbiyay. Waan wacay, fariimaha ka tagay oo iimayl baan u diray. Farriinta codku waa buuxdaa waxaana ka baqayaa in aan waayo dheefaha,” Katerina ayaa sharraxday.
Wicitaannada gargaarka cunnada ayaa ka mid ah kuwa ugu badan oo AUW 211 Khadka caawinta ayaa raadraaca isbeddellada ku jira dashboardka wakhtiga-dhabta ah si loo ogaado marka loo baahan yahay caawimo dheeraad ah. Khabiirka AUW 211 waxa uu Katerina ka caawiyay in ay ku xidho bakhaarrada cuntada waxana uu siiyey macluumaadka xidhiidhka ee Caawinta Hands Hawaii SNAP Outreach, oo ah barnaamij loogu talagalay in lagu caawiyo codsiyada iyo su'aalaha. "Waan ogahay inay jiraan dad badan oo baahan, waxaana isku dayayaa inaan dulqaato, laakiin kuma sheegi karo sida aan ugu mahadcelinayo 211 iyo 'Princess Leia' haweeneyda wanaagsan ee iga caawisay 211."